Indlela yokusebenzisa i-ratios kwizibalo
Kwiimathematika, umlinganiselo kukuthelekiswa kwamanani obuninzi obuninzi okanye obuninzi obubonisa ubungakanani bazo. Inokuthi ithathelwe ingqalelo njengendlela yokuthelekisa amanani ngokuhlula. Ngomlinganiselo wamanani amabini, ixabiso lokuqala libizwa ngokuba yi-ancedent kwaye inombolo yesibini yinto elandelayo.
Imilinganiselo yoBomi bemihla ngemihla
Iimitha ezili-60 ngeyure enye (igama "ngalinye" libonisa ngokukhawuleza umlinganiselo)
Iindleko ngomyalezo wesicatshulwa
1 ukuya ku-28,000,000 ithuba lokuwina iLotter
3 ootitshala abali-76 abafundi
Indlela yokubhala imilinganiselo
Kuhle ukuba ubhale umlinganiselo usebenzisa i-colon, njengolu hlobo, okanye njengengxube . Kwizibalo, ngokuqhelekileyo zikhetha ukulula ukuthelekisa kumanani amancinci onke . Ngoko, endaweni yokuthelekisa i-12 ukuya kwe-16, unokwahlula inombolo nganye nge-4 ukufumana u-3 ukuya ku-4.
3 ukuya ku-4
0.75 (i-decimal isavumelekile, nangona ingasetyenziswa ngokuqhelekileyo)
Ukuba uceliwe ukuba unike impendulo "njengomlinganiselo", ifomathi yekoloni okanye iqhekeza ikhethwa ngokugqithisileyo.
Inzuzo enkulu yokusebenzisa i-colon ye-ratios ibonakala xa uqhathanisa ubuninzi bexabiso. Umzekelo, ukuba ulungiselela umxube obiza i-oli ye-1, i-part part iviniga, kunye neengxenye ezili-10 zamanzi, ungabonisa umlinganiselo weoli ukuya kuviniga ukuze unamanzi njengo-1: 1: 10. Kwakuncedo ukubonisa ubungakanani bento. Umzekelo, umlinganiselo wemilinganiselo yebhloko yokhuni ingaba ngu-2: 4: 10 (ezimbini-ezine-ezine ezide ubude).
Qaphela ukuba amanani alulwanga lula kulo mongo.
Ukulinganisela Example Calculations
Umzekelo olula uza kuthelekisa iinani zeentlobo zeziqhamo kwisitya. Ukuba kukho ii-apula ezingama-6 kwisitya esineziqhamo ezili-8 zesiqhamo, umlinganiselo weapulo ukuya kwisixa esipheleleyo sesiqhamo kuya kuba ngu-6: 8, eyanciphisa ukuya ku-3: 4.
Ukuba ezimbini zeziqhamo zeziqhamo zi-oranges, umlinganiselo weeaples kwiimonon i-6: 2 okanye i-3: 1.
Umzekelo: UDkt. Pasture, ugqirha wezilwanyana zasemaphandleni, uphatha ezimbini iintlobo zezilwanyana - iinkomo kunye namahashe. Kwiveki ephelileyo, waphatha iinkomo ezili-12 kunye namahashe angama-16.
Icandelo ukuya kwiNgxenyano yeNgxenye: Iyintoni umlinganiselo weenkomo eziya kumahashe awaphathayo?
Yenza lula: 12:16 = 3: 4
Kuzo zonke iinkomo ezi-3 ezenziwa nguDkt.
Icandelo lokulinganisa ngokupheleleyo: Iyintoni umlinganiselo weenkomo aziphathe ngayo kwinani lezilwanyana ayeliphatha?
Yenza lula: 12:30 = 2: 5
Oku kungabhalwa ngokuthi:
2 ukuya ku-5
Kuzo zonke izilwanyana ezi-5 ezenziwa nguDkt.
Uvavanyo lweSample Exercises
Sebenzisa ulwazi lwentlalo malunga neqela lokuhamba ukugqiba oku kulandelayo.
I-Dale Union School Highing Marching Band
56 abadlali beetsimbi
1. Yintoni umlinganiselo wabafana kumantombazana? 2: 3 okanye 2/3
2. Yintoni umlinganiselo wabantu abatshatshayo ukuya kwinani elipheleleyo lamalungu ebandla? 127: 300 okanye 127/300
3. Uphi umlinganiselo wabadlali bee-percussionists kwinani elipheleleyo lamalungu ebandla? 7:25 okanye 7/25
4. Nguwuphi umlinganiselo wabafundi abasemakhankathini abadala? 1: 1 okanye 1/1
5. Ziyintoni umlinganiselo we-sophomores ukuya kubafundi abancinane?
63:55 okanye 63/55
6. Iyintoni umlinganiselo wabantu abatsha abaya kubadala? 127: 55 okanye 127/55
7. Ukuba ngaba abafundi abangama-25 bashiya isigaba sokhuni ukuze bajoyine inxalenye yechungechunge, ingaba yintoni inani elitsha lamaplanga?
Ama-woodwinds angama-160 - ama-woodwinds angu-135 = ama-135
Iingcali ezingama-84 + ii-percussionists = 109 ii-percussionists
109: 135 okanye 109/135
Macro ne Microsociology
UGanga: UThixokazikazi wamaHindu woMlambo oyiNgcwele
Ulwalamano luka-Elvis Presley lwaluphi na izidakamizwa?
Ikholeji yeCharleston GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iimpapasho ezigqwesileyo eziphezulu malunga neWars e-Iraq nase-Afghanistan